Fikradda naqshadaynta ee 24 Crazy 3D Tattoos Fikirka Ragga iyo Haweenka - Fikradaha Fikradaha Madadaalo
Fikradda naqshadaynta ee 24 Crazy 3D Tattoos Fikradda Loogu Talagalay Ragga iyo Haweenka
Sonitattoo November 15, 2016
Raadinta qaabka ugu fiican ee rafcaanka 3d naqshadeynta farshaxanka farshaxanka. Halkaan waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah sawirada sawirada TIME 3.
1. Tattoos xoogan oo 3D ah
Ma aragtay tattoosyada # 3D awood badan oo sidan ka hor ah? Waxaa jira waxyaabo aad u baahan tahay si aad u ogaato haddii aad u socoto tattoo this. Haddii aad qabanqaabinayso tattoo muddo dheer ama haddii aad dhab ahaantii aad rabto in aad hesho tattoo 3D ee ugu horeysay waa gebi ahaan wax aad u xiiso leh.
2. Super 3D Tattoos
Waxaa laga yaabaa inaad ka fekereyso haddii aad yeelan doonto super 3D #tattoo sidan oo kale. Iyada oo gacan laga helayo farshaxan wanaagsan, waa suurtagal.
3. Cool 3D Tattoos
Ka feker sidaad tani u xajisatay xNUMXD oo aad u fiican oo aanad ku caawin karin laakiin aad dareemayso awood leh markaad dhagax noocaan oo kale ah ku dhejisid.
4. Beautiful 3D Tatoo
Ka hor intaadan tegin tintaan quruxda leh ee 3D, tixgeli nooca walxaha lagu isticmaali doono. Waxaa laga yaabaa inaad ku xanuunto dareen xanuun haddii aanad daryeel fiican ka helin farshaxankaaga. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay waa inaad xirtaan wax aad u jilicsan oo raaxo leh
5. Tattoo 3D cabsi leh
Haddii aanad rabin, 3D tattoo sida tan waxay dareemi kartaa baqdin marka hore. Tani waa waxa ka dhigaya mid ka mid ah dadka ugu badan ee la raadinayo dad badan.
6. Dharka Tartu 3D
Ka hor intaadan helin dharkaaga 3D, waxaa lagaa codsan doonaa inaad saxiixdo foomka ogolaanshaha kaas oo ka heli doona macluumaadka ku saabsan taariikhda daawadaada. Sababtu waa sababta oo ah infekshin dhici karta inta lagu jiro suufka.
7. Kabaha 3D Tattoo
Waxaad xakameyn doontaa markaad aragto tashadaan 3D cajiib ah. Tattooist ayaa qaadan doonta wakhti si loo hubiyo in tattoo kabahaagu si fiican ugu habboonaato mid kasta oo lugahaaga ah.
8. Walaac 3D Tattoo
Marka diyaargarowga la diyaariyo, tani waxay 3D ka dhigan kartaa farqiga. Fiiri muraayada oo eeg aragtida dhabta ah ee ku saabsan sida aad dhab ahaan u eegi lahayd.
Marka ay barta tattooist bilaabmeyso adiga ishaada 3D, jidhkaaga ayaa la wareegi doona adrenaline. Tani waxay kaa dhigi kartaa inaad dareentid inaad dareentid, sidaa darteed hubi in heerarka gulukoostaada ay ku xiran yihiin adiga oo hubinaya in aad cunaysay horay gacanta.
Saltoosku way dhibsanayaan, laakiin ha u maleynina in tattoo 3D ay dhab ahaantii dhaawac u geysan karto. Waxaad naftaada ka baqi kartaa adigoo muusiko, buug, ama hadal. Qaar ka mid ah dadku waxay ku suganyihiin nabadgelyo iyo dayactir; wax kasta oo kugu haboon marka aad u socoto xamaashka 3D.
11. Neck 3D Tattoo
Maaha cadaadis markaad u tagto qoorta 3D. Bal qiyaas sida ay u egtahay. Ma quruxsan yahay? Waxaad heli kartaa sidan oo kale.
Tattooistkaaga ayaa ku siin doona qaar ka mid ah astaamaha ku saabsan xamaamkaaga 3D. Xitaa waxaad qaadan kartaa kamaraddaada adigoo raacaya sawirro waaweyn markaad sawir qaadid.
13. Calool 3D Tattoo
Dufanka caloosha ayaa ah wax ka mid ah dabeecadaha aan waxtarka lahayn. Inta badan dadka u tagaayo tattoo tani waxay ka dhigan tahay farxad sababtoo ah waxa naqshaduhu noqdeen.
14. Taariikhda 3D Tattoo
Haddii aad ka fekereyso helitaanka shaashadda 3D, waa lagama maarmaan in la baadho istuudiyaha tattoo oo ah kan ugu fiican ee naqshadahan lagu sameeyo. Tani waxay kaa caawineysaa inaad hesho qaabka ugu fiican ee xNUMXD.
15. Dhuxusha 3D Tattoo
La taliyaha ugu horeeya ee leh tattooistkaaga ayaa kaa caawin kara inaad hesho qalinka canabka ah ee 3D. Marka aad leedahay tattoo quruxsan sida tan, waxaad ku jiri doontaa qaro aad u qurux badan mar kasta oo aad dibedda ku socoto.
16. Xeeldheer 3D Tattoo
Rugta ugu fiican ee tattooing ayaa kaliya isticmaali doonta khabiiradooda ugu khibrad badan uguna khibrad badan si ay kaaga caawiyaan garabkaaga 3D tattoo.
Waxaad noqon doontaa aqoon u leh hababka tattoo ee ugu dambeeyay iyo casriyeynta ka hor intaadan helin tinweerka spider3D. Naqshad jilicsan waxaa kaliya oo lagu sawiraa farshaxan wanaagsan.
18. Dhiiga dhiigga 3D Tattoo
Weligaa ma aragtay nooc ka mid ah isha dhiigga ee 3D? In badan oo naga mid ahi waxay rabaan in ay wax ka qabtaan wax aan caadi ahayn; Tani waa mid ka mid ah naqshadaha aad u baahan tahay.
19. Dib u soo laabashada 3D Tattoo
Ka fiirso tan oo arag sida ugu wanaagsan ee aad uga heli karto quruxda quruxda 3D oo kale oo sidan ah. Markaad diyaar u tahay inaad tan sameyso, hubso inaad haysato adeegyadda farshaxanno wanaagsan.
20. Tattoo Lovely 3D
Faahfaahinta ka dambeysa tintaan quruxda badan ee 3D ayaa kaliya oo lagu muujin karaa oo keliya marka la sawiro. Qiimaha tani waxaa la heli karaa marka farshaxanka uu ku siinayo qadarin.
21. Tattoo Funny 3D
Tattoo 3D hadda waa mid ka mid ah dadka ugu cadcad dadka. Markaad ka fekereyso inaad bilawdo tattoo-tintaan, hubso in wax walba oo aad sameyneyso uu yahay sida qashinka oo kale.
22. Dhimashada 3D Tattoo
Khubarada ayaa kuu sheegi doona waxa aad u baahan tahay si aad u ogaato nooca nooca 3D. Sidee u jeceshahay naqshadeynta iyo waxa loo baahan yahay si loo helo?
23. Alligator 3D Tattoo Art Work
24. Ciise on iskutallaabta 3d Tattoo Design
tattoostattoos iskutallaabtatattoos ubaxtattoos gacantaTattoo infinitytattoos sleevelammaanahaJoomatari Tattoosnaqshadeynta mehnditattoo biyo ahtattoos cagtaTartoo ubax badanwaxay jecel yihiin tattoosshaatiinka shiidanTattoos Wadnahafikradaha tattootattoos qorraxdasawirrada raggaarrow Tattootattoos qabaa'ilkaDhaqdhaqaaqatattoos taajkiitaraagada kubbaddatattoos saaxiib saxa ahtattoos eagletattoo maroodigasawirada gabdhahacalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahjimicsiga bisadahakoi kalluunkatattoo dheemangadaal u laabotattoos qosol lehsawirada malaa'igtaTattoo Feathertattoo tilmaantattoo ah octopusshimbir shimbirlibto libaaxtattoos qoortawaxaa la dhajiyay tattoossawir gacmeedtattoo indhahaTilmaamta jaalaha ahhenna tattoomuusikada muusikadaku dhaji tattoostattoos moongaraacista gacmahalaabto laabta